Dad Ku Dhintay Shil Gaadhi Oo Ka Dhacay Gudaha Magaaladda Hargaysa | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Dad Ku Dhintay Shil Gaadhi Oo Ka Dhacay Gudaha Magaaladda Hargaysa
Hargaysa (SDWO): Hal qof ayaa ku geeriyooday 2 kale-na way ku dhaawac meen shil baabuur oo maanta duhurnimadii ka dhacay gudaha magaaladda Hargaysa.
Kadib markii gaadhi nooca xamuulka qaada ah uu ku dhacay jidka mara halka uu ku yaallo Sinimoogii hore ee magaaladda Hargaysa.
Baabuurkaasi oo siday Silig aad u fara badan ayaa la sheegay in markii uu marayay jidkaasi oo dalcad ah ay u suuro geli wayday in uu halkaasi ka gudbo, kaasoo dib uga soo noqday wadadii uu marayay.
Siliga uu baabuurkaasi siday ayaa waxa dusha sare ka sii saarnaa saddex qof oo ka mida ahaa shaqaalaha muruq maalka ama xamaalka loo yaqaano oo loo malaynayo in ay doonayeen in ay baabuurkaasi siliga ka dejiyaan marka uu gaadho meesha uu u socday.
Iyadoo markii uu gaadhigaasi dhacay waxaa uu dhaawac halis ahi soo gaadhay saddexdii qof ee dusha ka saarnaa, iyadoo mid ka mida saddexdii nin ee dhaawaca ahaa uu midkood geeriyooday markii cusbitaalka la geeyay.
Labadda qof ee kale ayaa la dhigay cusbitaalka guud ee Hargaysa, halkaasoo lagu daawaynayo.
Waxaa marar badan dhacda in gawaadhiga xamuulka culus sidaa markay marayaan jidkaasi Sinimoogii hore ee Hargaysa ay qaarkood dib uga soo noqdaan wadadaasi oo marka loo socda dhinaca idaacadda ah mid dalcadda.
Waxaana shilalkaasi ka dhasha khasaare kala duwan oo naf iyo meel-ba leh.